Cunista Bisadaha, Maile Ohye iyo feedhka Daanyeerka | Martech Zone
Hada uun waxaa helay iimaylkan:
Waxaan maqlay Douglas oo ka hadlaya Blog Indiana oo ku saabsan sida SEO waa dhintay ereyada muhiimka ahna muhiim uma aha sidii ay ahaan jireen. Sidee wax ku ool ah ugu qancin kartaa macaamiisha tan? Ma xiiseyneysaa inaad qaadato.
Fiiro gaar ah: In kasta oo ereyada muhiimka ahi aysan as muhiim ah… wali waa muhiim in la adeegsado ereyada muhiimka ah. Waqti badan ayaan kula qaadanaa macaamiisheenna baaritaanka erayga muhiimka ah. Boggan aan la wadaagay dhagaystayaasha si aan u muujiyo inaad u baahan tahay ereyga saxda ah ee saxda ah (iyo higgaadinta) wuxuu ahaa rootiga bisadda iyo taranka bisadda. Kani waa bisadda bisadda:
Ka dhigista macaamiisha inay fahmaan in isticmaalka erayga muhiimka ahi aanu ahayn sida muhiimka ah ayaa ka dhib badan. In kasta oo makiinadaha raadintu ay isbeddello joogto ah ku sameeyaan algorithms-kooda, shirkaduhu aad ayey uga gaabiyeen inay qaataan Gudaha warshadaha SEO, waxaan ilaalinaa feejignaan feejignaan leh waxaanuna isla markiiba hirgalineynaa isbeddelo si macaamiishayadu ay uga faa'iideystaan ​​raadinta oo ay uga sii horreeyaan tartanka. Haddii macaamiishaadu aysan ku rumaysan, waxaan kugula talin lahaa xeelado dhowr ah.
Marka hore, talo ka qaad Google. Maile Ohye waa maamule wax soo saar raadinta Google wuxuuna tilmaamayaa qaladaadka guud ee ay suuqleydu ka galaan markay tahay hagaajinta mashiinka raadinta. Waxaad ogaan doontaa taas keywords kuma jiraan wadahadalka! Khaladaadka ay sameeyaan waa la'aanta soo jeedin qiimo leh, ma lahan qaab qeybsanaan, iyadoo la adeegsanayo habab shaqo, fiiro gaar ah u yeelan doonin isbeddelada SEO iyo gaabis gaabis ah.
Waayahay… Google ayaa tidhi adiguna waad tidhi, laakiin macmiilkaagu wali ma rumaysan. Waxaa ku xiga waa feedh daanyeer hab. A feedh daanyeer waa gunti gaar ah oo ku xidhan dhamaadka xadhigga. Ciidanka Badda dhexdeeda, markay maraakiibta u yimaadaan inay barroosinka dhigaan, waxaad ku tuuri lahayd feedhka daanyeer xeebta halkaasoo qof ku qaban karo kuna soo jiidan karo xarigga. Dhamaadka xariggaasi wuxuu ahaa xarigga weyn ee isku xiraya. Ma tuuri kartid xarigga weyn, markaa waxaad ku billaabaneysaa xarigga yar. Ku tuur macmiilkaaga feedh daanyeer ka hor intaadan isku dayin inaad ku tuurto xarigga weyn.
La samee tijaabo iyaga oo ah meesha aad ku habboon tahay 10 qoraallada jira ee jira adoo adeegsanaya ereyada muhiimka ah. Raadi 10 qoraal meesha aad kujirto darajada laakiin si fiican uguma qiimeyn keyword la siiyo. Kordhi ereyada muhiimka ah, u adeegso cinwaannada, ka hel sawirro aad uga isticmaali karto astaamaha qoraalka beddelka ah, hubso inaad haysato 3 illaa 4 ku xusan qoraalka si loo hagaajiyo cufnaanta ereyga. La soco waqtiga aad ku bixinaysid hagaajinta qoraalladaas, sug 4 toddobaad oo cabir natiijooyinka falanqayntaada.
Samee imtixaan aad ku qorto 10 qoraallo cusub oo blog ah oo qasbaya. Adeegso sawirro waaweyn - laga yaabee sawirrada macaamiisha ama sawirrada saamiyada qaarkood oo qurux badan, qor cinwaanno ku jiidan kara dadka akhrinaya wax badan, qorna sheekooyinka macaamiisha ama qoraallo talo bixin ah oo run ahaantii ka caawin doona macaamiishaada. Iska ilow adeegsiga erayga muhiimka ah… iska indha tir. La wadaag shaqada Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, StumbleUpon iyo meel kasta oo aad awoodid. Ku dhufo qaar ka mid ah sheekooyinka. La soco waqtiga aad qaadatay, sug 4 toddobaad oo cabir natiijooyinka gorfayntaada.
Adoo diirada saaraya macaamiishaada iyo waxa ku jira halkii ereyada muhiimka ah, waxaan ku kalsoonahay inaad ogaan doonto in ikhtiyaarka labaad uu ka fiicnaan doono xulashada koowaad markasta. Cidna kulama talinayo inay joojiso niyadda, ujeedkeygu wuxuu yahay marka aad joojiso inaad diirada saarto farsamooyinka hagaajinta mashiinka raadinta iyo, taa baddalkeeda, inaad dadaalkaaga geliso nuxur weyn iyo dhiirrigelinta waxyaabahaas - waad guuleysan doontaa mar kasta!
Crawlers iyo bots ma iibsadaan alaabadaada iyo adeegyadaada, dadku waa iibsadaan. Markaad bedesho qaabkaaga si aad ula hadasho gurguurto ama bot, waxaad lumin doontaa macaamiisha.
Tags: keywordisticmaalka erayga muhiimka ahmaile ohyedaanyeer feedhayna search engineSEO